Tony Blair: Duqeyn cirka ah kaliya loogama adkaan karo IS – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tony Blair: Duqeyn cirka ah kaliya loogama adkaan karo IS
A warsame 22 September 2014 22 September 2014
Mareeg.com: Rai’iisul wasaarhii hore ee Britain, Tony Blair, ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in aanan meesha laga saarin in ciidan dhulka ka dagaalama la adeegsado si looga adkaado kooxda Dowladda Islaamiga (IS).
Wareysi u siiyey BBC-da ayuu Mr Blair waxa uu ku sheegay in duqeynta cirka ah ay hakin karto kooxdan, balse aanan looga adkaanayn, waxaana loo baahanyahay buu yiri in la helo awoodda ciidan dhulka ah, so looga adkaado.
Blair, waxa uu intaasi ku daray, in ciidankaasi ay noqon karaan kuwa maxali ah, waxa uuna carabaabay ciidammada Kurdiyiinta, iyo Ciidanka Ciraaq. Ma aha buu yiri qasab in ay noqdaan kuwa Mareykanka ama Britain.
Sabtidii, Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama, ayaa mar kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in aanan marna la isticmaali doonin ciidan Mareykan ah oo dhulka ka dagaalama si loola dagaalamo kooxda Dowladda Islaamiga.
Tony Blair, ayaa xilligii uu ahaa Ra’iisul wasaaraha, waxa uu hormuud ka ahaa duulaankii lagu qaaday Ciraaq waxaana uu arrintaasi ku taageeray Mareykanka.
DF oo ku dhawaaqday wadahadal ay la geleyso Puntland
Alshabaab oo sii wada qarxinta Leyrarka cadceeda ku shaqeeya & maamulka Banaadir oo ku fashilan